မိုးရွာပြီဆို အမေ ပြောပြောနေကျစကားလေး .....
" မိုးဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့ သင်္ကေတ
အေးမြခြင်းရဲ့ သင်္ကေတ " လို့အမေပြောခဲ့တယ်နော် ၊
ခုတော့ အမေရယ် .....၊
အပူရောင်လွှမ်းပြီး ၊ နွမ်းလျ ၊ အမေ့ကိုပဲ သတိယနေတယ်လေ ...၊ ခုဆို အမေကော ...
သူတို့ပြောတဲ့ ကောင်းကင်ဘုံမှာပျော်နေမလား ၊ သားကိုသတိယနေမလား ၊ ဒါမှမဟုတ် မေ့နေမလား ၊ သားကတော့ ငယ်ငယ် အမေချော့သိပ်နေကျ စကားလေး...
" မိတ္ထီလာကန်တော်အောက်က ဖားကောက် ခဲ့ပါ " တေးလေး ...၊
ကြားယောင်ရင်းအိပ်ပျက်ညတွေနဲ့ ရင်းနှီးနေပြီအမေ ၊ အမေ့ကိုလွမ်းတယ်အမေရယ်...
ငယ်ငယ်ကဆို " တော်တော်ဆိုးမယ့်သား " " သားဦးစနေဆိုတော့ ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ "
ပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်တဲ့စကား ...အမေ့နားမှာ အံမဝင်ခဲ့ဘူးနော် ။
" ကျုပ်သားက ဆိုးတာမဟုတ်ပါဘူးတော် ၊ လူမှန်တော်ရေ ... ရမ်းကားတာမှမဟုတ်တာ ..၊ သူတို့က
ဘာသွားလုပ်မှန်းမှမသိ ၊ ဖြစ်လာတော့မှ ကျုပ်သားကိုအပြစ်ပုံချတာ " လို့ အမြဲပြန်ချေပ တတ်တဲ့အမေ
သားဘက်မှာအမြဲရှိတဲ့အမေ ၊ ခုကော
ကောင်းကင်ဘုံကနေ အမေ ငဲ့ကြည့်နေမလား ၊ မျက်နှာမဲ့ပြီးကဲ့ရဲ့နေမလား ၊
" ဒါမှအမေ့သား " လို့ ဟစ်ကြွေးနေမလား....၊ သားသိချင်တယ်အမေ
မရိုးနိုင်တဲ့နေရက်တွေကြား ၊ သားအရင်လိုမဆိုးတော့ပါဘူးအမေ ၊ အမေပြောတဲ့စကားတွေ ပြန်ကြားယောင်ရင်းပေါ့
ဆရာတော်တစ်ပါးရေးထားတဲ့စာသားလေး အမေပြန်ပြောပြမယ်နော် ၊
အမေ..၊အဖေ ..၊ ဆွေမျိုး ၊မိတ်ဆွေတွေ ပြုလုပ်မပေးနိုင်တဲ့ အရာ ..တစ်ခုရှိတယ်
အဲဒါကတော့ စိတ်ထားကြီးမြင့်အောင် ကျင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းပဲ သားရဲ့ ၊ ဒီတော့ သားရယ်
လိမ္မာအောင်နေပါ ၊ ယဉ်ကျေးစွာဆက်ဆံပါ ၊ ဒေါသနည်းအောင်လဲနေနော် ၊ အရာသည်းခံ စိတ်လေးနဲ့
အမေ့စကားသံတွေ ရင်အုံရိုက်ခတ်တိုင်း ဘာသာရေး အသိတွေ တစ တစ ဝင် ၊ သားလိမ္မာအောင် သင်နေပါတယ် အမေ ၊
တစ်ခါ တစ်ခါ ဘဝကို ဒုံးစိုင်း မြင်းရိုင်း တစ်ကောင်လို့ စေ့စားပစ်လိုက်ချင်ရဲ့ ၊ အမေ့ရဲ့ စကားသံ
တွေအတိက် ကနေ ဆွဲမခေါ်ဖြစ်ရင်ပေါ့ ၊
" လူမှန်ရင် အပူဒဏ်ဆိုတာ
လူတိုင်းခံစားရတတ်တာပဲလေ သားရဲ့ ၊ ငါ့ကျမှ ကွက်ပြီးခံစားရတယ် " လို့တွေးမိရင် ဘယ်လူပီသတော့
မလဲ ၊ "
" မြေကြီးဆိုတာ လူတိုင်း အနင်းခံ ရတာပဲလေ ၊ သူနင်းလို့ ငါနာလိုက်တာ ၊ သူ့တွင်းကြောင့်
အလှတွေ ဗလာကျင်းသွားပြီ " ဆိုပြီး မညည်းညူးဘူး ၊ ဒီတော့သားရယ်
ဒုက္ခ သုက္ခတွေ သားတစ်ယောက်ထဲ ပဲ ခံစားရတယ်လို့ မတွေးနဲ့လေ ..၊
သြော် ငါ့လို ပဲ ခံစားရတဲ့ သူတွေလဲ မနည်းမနော ပါပဲလား လို့ တွေးပြီး
လုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ် ၊ သားလုပ်ရင်ဖြစ်မှာပါ သားရဲ့
ကျနော့်ကိုအားတွေ ပေးခဲ့တဲ့အမေ ၊ သတ္တိတွေ ပေးခဲ့တယ်အမေ ၊ လွမ်းတယ်အမေရယ် ....
ကျနော်အိမ်ပြန်ရတော့မည် " (ဆရာနွမ်ဂျာသိုင်း)
ဟုတ်တယ် အမေ ၊ ဒီချိန်ပဲ သားတို့နဲ့ အမေဝေးခဲ့ကြတာ ၊ သားတို့ဆွေးခဲ့ကြတာ ၊
မိုးကိုချစ်တဲ့အမေ မိုးရေစက်တွေကြားမှာေ ပျာက်ကွယ်ခဲ့တယ် သူတို့ကတော့ပြောတယ်
မင်းတို့အမေ မင်းတို့ကိုထားသွားပြီ " တဲ့
သားမထင်ဘူးအမေ ၊ အမေခုထိ သားအနားမှာရှိတုန်း ၊ နွေထွေးနေတုန်း ပါ အမေရဲ့ ...
အလွမ်းတွေ မခမ်းသေး သရွေ့ ရောရမ်း ပြီး မိုးတွေကိုကျိန်ဆဲနေလို့လားမသိဘူး
မိုးစက်တွေတောင်ဆဲလုလု ၊ ည ကာလ ဟာ
ကြယ်မစုံသလို လေတစ်ချက်သွေ့ရင်တောင် ချောက်ခြားမှု့တွေနဲ့ဖွဲ့သီနေတယ် ၊
Posted by မောင်ရေခဲ(အဝတ်နီ) at 11:27 AM 1 comment:
ပြီးတော့ အုတ်ဂူတစ်လုံး...သူငေးကြည့်နေခဲ့မိတယ်...ပါးစပ်ကလည်းဖွင့်ဟပြော လျက်........... " ဘော်ဒါညီလေး....ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အိပ်စက်အနားယူပါတော့....
မင်းအတွက်..နောက်ဘဝဆိုတာရှိခဲ့ရင် ငြိမ်းချမ်းမှု့..မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပြည်စုံတဲ့အချစ်တွေ ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ " တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ကွာ..လက်မပြ နှုတ်မဆက်ဘဲ မင်းထွက်ခွါသွားတာကတော့ဆိုးလွန်းလှပါတယ် မင်းအတွက် "ပူလောင်ပါတယ်လို့လူတွေသတ်မှတ်တဲ့မီးတွေကဒီတစ်ခါတော့ မင်းကိုအေးမြစေမှာပါ "
တခမ်းတနား ချစ်ခွင့်မရှိခဲ့တဲ့ ဘော်ဒါညီလေးအတွက် တခမ်းတနားတော့ ကြေကွဲခဲ့ရတာပဲလေ။
အားလုံးကြေကွဲဝမ်းနည်းခဲ့ရတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါအချစ်ဆိုတာရွှေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာ မင်းနားလည်သွား လောက်ပါတယ် ။
ဒီလို အချစ်နဲ့ဘဝ အတွက် ရွှေးချယ်ရသလိုမျိုး နောင်ဘယ်ဘဝမှမရွှေးချယ်ရပါစေနဲ့ အရာရာအဆင်ပြေတဲ့ အချစ်နဲ့ဘဝဒွန်တွဲကာပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ " ..ဘော်ဒါလေး ရေ..ကံကြမ္မာကိုငါ အယုံအကြည်မမဲ့ရဲတော့ပါဘူးကွာ .." " ဘော်ဒါလေး...မင်းကိုအမြဲမဟုတ်တောင်မကြာခဏအမှတ်ရနေမှာပါအချစ်အတွက်မင်းရဲ့
ငါအတွက်တော့ပုံပြင်တစ်ပုဒ် သာသာပါပဲကွာ " ။။ ထားပါတော့ .. ငါ့အတ္တတွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ဒီစာတွေဟာကာရံမညီဘူးဆိုတာ သိပါတယ်ဘော်ဒါလေးအနေနဲ့သဘောထားကွဲ လွဲခွင့်ရှိပါတယ်...........
" ဘော်ဒါလေးဆန္ဒနဲ့ လက်တွေ့ကာလမှာမညီညွတ်တဲ့ ဘော်ဒါလေးအတွက်အသက်ကိုပိုးဖလံ
တစ်ကောင်ရဲ့ဘဝလို , စတေးခဲ့တာဟာ..ငါတို့ဝန်း ကျင်မှာ အကြေကွဲ ရဆုံးက မင်းရဲ့ မားသားကြီးပဲ
မင်းကိုတမ်းတနေတဲ့ ,မင်းဆန္ဒကိုမသိတဲ့ ,မင်းအမေအတွက် ငါစိတ်မကောင်းဘူး ။
ငါ့အမေ လိုစိတ်မျိုးနဲ့ဆို မင်းတို့နှစ်ယောက်သေကွဲမကွဲ နိုင်ဘူးလို့ ငါထင်တယ်ကွာ..... ဒါကလည်းငါ့ အထင်ပဲလေ...
သားသမီးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးတွေပဲ ပေးချင်တာလေ (...ဒါနဲ့မင်းကောင်မလေးကတော့ တော်တော် ချောတယ်နော်....ဒါနဲ့များကွာဆင်းရဲတာကတော့ဘဝကံလို့
မင်းအပေါ်စိုးရိမ်လွန်ကဲတာပဲ ။ ဒီလိုလွန်ကဲတဲ့ အထဲက ဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တဲ့ မင်းရဲ့ "အချစ်အတွက်အသက်တစ်ချောင်း...အရိုးဆွေးတဲ့အထိပေါင်းဖက်ချင်တဲ့မင်းဆန္ဒတွေ........
သေကောင်ပေါင်းလည်း ချစ်သူနဲ့နေချင်တဲ့ မင်းရဲ့စိတ်တွေ ............. အရာအားလုံးမပြီးဆုံး သေးခင် မင်းဘဝကတော့ နေဝင်သွားခဲ့ပြီ...ပြဿနာတစ်ခုဆိုတာ..ဘဝတစ်ခုနေဝင်ရုံနဲ့ပြီးပျက်သွားတာ မှ မဟုတ်တာ မင်းကတော့ ငြိမ်းချမ်းစွာ အိပ်စက်သွားပေမယ့်မင်း ချစ်ချစ်ကတော့ တစ်ယောက်ထဲပြဿနာအားလုံး ရင်စည်းခံ ဖြေရှင်းနေရလေရဲ့ ။ မင်းမားသား ကြီးရဲ့စကားသံတွေ မင်းဆွေမျိုးတွေရဲ့ ကဲ့ရဲသံတွေ အားလုံးကိုခံရတာလေ
"ငါ့သားကိုသတ်တာနင် "ဆိုတဲ့အသံတွေ ...
"ငါ့သူငယ်ချင်းကို သတ်တာနင်...." ဆိုတဲ့ အသံတွေ................
အပြစ်တင်သံတွေ .............. .
မိန်းမသားတစ်ယောက် ခံနိုင်ရည် မဲ့လောက်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပေါ့ကွာ....
အဲဒီ ရောက်မှ လောကဓံဆိုတာ ....ဒါပါလားလို့တွေးမိတယ် ။ မင်းရဲ့ ချစ်ချစ်ကိုလည်း လေးစားမိတယ် ဘဝကို ဒေါင်ကျကျပြားကျကျ နေတတ်တဲ့ မင်းချစ်ချစ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ အလေးပြုမိတယ် ။
"ငါဆိုရင်ရော သူမလို ကြုံတွေ့ခဲ့ရင် အချစ်နဲ့ သေကွဲ ကွဲခဲ့ရင်....
ဘယ်လိုများ ဘဝကို အသက်ဆက်မှာပါလိမ့် ........" ငါ့ကိုငါတွေး နေမိတယ် ။
ဘဝရဲ့အပိုင်း အစ လောက်သာ တန်ဖို့ ရှိတဲ့ " အချစ် " အတွက် အသက် နဲ့ဘဝ ကို
ငါ ဘယ်တော့ မှ မစတေးဘူး ။
မသေချာတဲ့ အလောင်း အစား တစ်ခု အတွက်လူ စတေးခဲ့ရတာ ဘယ်လောက် တောင်
ရှိနေပြီလဲ ငါတို့ ကရော ဘယ်လောက်များ ဘဝ အတွက် ခရီးရောက်နေပြီလဲ
ကိုယ်နေတဲ့ ဘဝကိုရော နေပျော်အောင် နေနိုင် ပြီလား ?
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးကြည့်တော့ ဘာမှ ရေရေ ရာရာ မရှိ ငုံးတိတိပါပဲ.....
အိပ်ယာဝင်တေး ကို ရေးရေးလေးလေး ရွက်ကြည့်တယ် ။ ဘာမှ ရေရေ ရာရာ မရှိတဲ့နောက်မှာတော့ ငါအိပ်ပြီပေါ့ကွာ..........မင်း
ကိုသတိ မရလို့မဟုတ်ပါဘူး သတိရလွန်းတော့ လည်း ........။
ဝန်ခံချက် ... ။
ဘဝဆိုတဲ့စာမျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံးမှာ ....... အလွမ်းတွေနဲ့စာဖွဲ့ခဲ့ရတဲ့နေတွေဟာမနည်းမနောပါပဲ ။ အချစ်အတွက်အလွမ်းတွေ အမုန်းအတွက်အလွမ်းတွေ ပြီးတော့
သံယောဇဉ်နဲ့ဖွဲတည်ထားတဲ့အလွမ်းတွေပဲပေါ့ ။ ဘယ်အရာတွေမှမတည်မြဲဘူးဆိုတာသိပေမယ့် ခုထိ လွမ်းရဆဲ လွမ်းနေဆဲအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲချရေးမှာပါ။
ကျနော့်ဘဝရဲ့အမှတ်ရစရာလေးတွေပေါ့လေ တခမ်းတနားနဲ့ ကို လွမ်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးပါပဲ ။
ကျနော်မှာဘော်ဒါ လို ညီလေး လို ခင်မင် သံယောဇဉ်ရှိတဲ့ ကောင်လေးသူငယ်ချင်းလေး
တစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးပါတယ် ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်ကပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သေကြောင်းကြံခဲ့တဲ့အတွက် ကျနော့်သူငယ်ချင်းဟာ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာခုဆို မြေမှုံတွေနဲ့ရောထွေးအိပ်ပျော်နေရော့မယ်လေ ။ တကယ်ပါ တကယ်ရင်နာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးပါပဲကျနော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစာရေးပြီးတင်ပြ ဖူးပါတယ် " ရင်ကွဲည " " ရင်ကွဲခဲ့ရတဲ့ည " "အရူးတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ဟတ်တတ်ကွဲခန်း" အယ်ခေါင်းစဉ်လေးတွေနဲ့ စာရေးပြီတင်ဖူးပါတယ် ။ ကျနော်ခုလိုပြန်တင်ပြရတာဟာ အကြောင်းအရင်းရှိပါတယ် ကျနော့်ရဲ့ဘော်ဒါညီလေးလို အဖြစ်မျိုးနောက်နောင်ဘယ်သူမှမဖြစ်စေချင်လို့ပါဗျာ ။ ကျနော်ရဲ့ အကိုအစ်မ တွေ ညီ ညီမတွေ အချစ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ် မစတေးဖို့ ပြီးတော့ အချစ်အတွက်နဲ့
မျှော်လင့်ချက်တွေ မသေဆုံးစေဖို့ ဒီစာလေးကို ကျနော့်ရဲ့ ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ရင်းပြီး ပြန်ပြောင်းပြောပြ အယ်.... ရေးပြရတာပါ ။ အစ်ကို ...အစ်မ ...ညီ ...ညီမ... တို့အားလုံး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချစ်,
ဘဝ, မျှော်လင့်ချက် , တွေပိုင်ဆိုင်ပါစေ လို့ ကျနော်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ။
Posted by မောင်ရေခဲ(အဝတ်နီ) at 11:30 AM No comments:
Mg Yay Khe
ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်း အသက်သွင်းထားတာပါ အကြိုက်တွေ့ခဲ့ရင် အသိတစ်ခုဝင်ခဲ့ရင် ကျနော်ဝမ်းသာပါရစေ ကျနော်သည် ကဗျာ ပညာရှင် မဟုတ်ပါ ထို့ကြောင့်အမှားတချို့လဲရှိနေပါလိမ့်မယ် သဘောထားကြီးနိုင်ပါစေလို့ ကျနော်ဆန္ဒပြုပါတယ် လျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့ပြယုဂ် ဝါသနာရဲ့အရင်းခံ နောက်ဆုံး ကျနော်ကိုယ်တိုင် ကာရံဖြစ်နေပေါ့ မောင်ရေခဲ(အဝတ်နီ) maungyaykhe@gmail.com
( ၁ ) ခံစားရလွန်းလို့ သူမမြင်ရာသဝန်တို သူ့ ရှေ့ဆိုငုတ်တုတ်မေ့ ရင်ငွေ့တွေတောင်အေးစက် တဝက်တပြက်စကားတွေ ရင်ဝ မှာမြို မြို ချရတယ် မလွယ...
အလွမ်းတွေရင်မှာပြည့်တောင်မှ ပန်းသခင်းရင်မှာ မလန်းနိုင်ဘု ကြွေကျရာ သခင်ပန်းပွင့်ရင် စေ...စေ ..ရာ မြင်တိုင်းပန်းတွေပ လွမ်းတိုင်းပွ...
သောက်ရေအိုးအောက်က ခပ်ဆွေးဆွေးသစ်သားလေးက မင်းပေါ့ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ တွေဝေစွာ ငဲ့ကြည့်နေမိတုန်း အသားထွင်းမျက်ရည်တွေက ဒူးထောက်မော့ကြည့် ...
သခင် ... သို့
နင်က ငါ့ဝိညာဉ်ကိုစောင့်ရှောက်သူပါ တိတ်တိတ်ကလေးကြေကွဲရတဲ့နေ့တွေ ရင်ခွင်ထဲမှာချော့သိပ် အနက်ရိပ်ကင်းမဲ့ဇုံမှာရှင်သန်စေခဲ့တယ် ။ ...
မင်းကို ငါ အရမ်းချစ်တယ်
မင်းကို ကိုယ် အရမ်းချစ်တယ် တကယ်တော့ ချစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောရရင် တော်တော်ခက်ပါရဲ့ ။ ဒါပေမယ့် ကြိုးစားပြီး ပြောကြည့်မယ် ၊ မင်း နဲ့ ကိုယ်...
ချစ်စိတ်နဲ့ပုံတူ ကူးကြည့်တာပါ နာမည်မတပ်လိုက်ပါနဲ့ ခံစားချက်တွေပေါ့သွားမှာစိုးလို့ အမျိုးအစားတွေနဲ့ ဇယားချမပြပါနဲ့ဗျာ ရင်ဖုံးအင်္ကျီ မှာ ...
လမ်း ( ၁ )
အတ္တတစ်စုကိုမွေးမြူဖို့ဆိုရင် ဓားအသွားကောင်းတစ်လက်ကို သိုဝှက်ထားဖို့လိုလာလိမ့်မယ် အတ္တနည်းတဲ့သစ်ပင်စိုက်မှ သစ်ကောင်းဝါးကောင်းမှတ်မှာမဟုတ်လ...
ရွာသာရွာချလိုက်ပါ အကြင်နာမိုး ၊ မေတ္တာမိုး ၊ သစ္စာမိုး ၊ အလွမ်းမိုး ၊ အဆွေးမိုး ၊ ကမ္ဘာပြုမိုး ၊ မရိုးနိုင်တဲ့ မိုးတွေ ရွာသာရွာချလိုက်ပါ...
ကြွေ - မျက်ရည်
နှင်းဆီပန်းပင်ကလေးက နှင်းဆီပန်းကလေးကိုပြောတယ်ကွဲ့ .. အချစ်ရဲ့ မင်းဟာ ငါ့ဘဝ အတွက် အဦးဆုံး ပထမဆုံး ပွင့်တဲ့ပန်းပါ လှပစွာဖူးပွင့်...
သူဟာ သူရဲကောင်းပါ ဘီလူးခေါင်း နဲ့ ဦးနှောက်မပါတဲ့ လူတစ်စုရဲ့လုပ်ရပ် ခုတ်သတ်ခံနေရတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ အတွက် ရင်မအေးတတ်တဲ့ သူ့နှလုံးသားကို င...
MTMReader Pro V3.1.3 ထွက်ရှိ
အိပ်မက်ရွာကလေးသို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
User blogs - Nyi Paing Lay
မောင်ရေခဲ(အဝတ်နီ). Simple theme. Powered by Blogger.